1 Ihe E Mere 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 5:1-26
5 Ụmụ Ruben+ bụ́ ọkpara Izrel—n’ihi na ọ bụ ya bụ ọkpara;+ ma n’ihi na Ruben merụrụ ihe ndina nna ya,+ e weere ihe ruuru ya dị ka ọkpara nye ụmụ Josef+ nwa Izrel, nke mere na e debaghị aha ya n’akwụkwọ usoro ọmụmụ dị ka ihe ruuru ya dị ka ọkpara si dị. 2 N’ihi na ọ bụ Juda+ kasị n’ime ụmụnne ya, onye ndú sikwa na ya pụta;+ ma, ọ bụ Josef ka e nyere ihe ruuru ọkpara+— 3 ụmụ Ruben bụ́ ọkpara Izrel bụ Henọk+ na Palu,+ Hezrọn na Kamaị.+ 4 Joel mụrụ Shemaya, Shemaya amụọ Gọg, Gọg amụọ Shimiaị, 5 Shimiaị amụọ Maịka, Maịka amụọ Reeya, Reeya amụọ Bel, 6 Bel amụọ Beera, bụ́ onye Tilgat-pilniza+ eze Asiria dọọrọ n’agha. Ya onwe ya bụ onyeisi ụmụ Ruben. 7 Ụmụnne ya, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, dị ka e si deba aha ha n’akwụkwọ,+ n’usoro ọmụmụ ha, bụ Jeayel bụ́ onyeisi ha, na Zekaraya, 8 na Bila nwa Ezaz nwa Shima nwa Joel+—o biri n’Aroa+ ruo Nibo+ na Bel-miọn.+ 9 N’ebe ọwụwa anyanwụ, o biri ruo n’ebe e si abanye n’ala ịkpa, n’akụkụ osimiri Yufretis,+ n’ihi na anụ ụlọ ha dị nnọọ ọtụtụ n’ala Gilied.+ 10 N’ụbọchị Sọl, ha busoro ndị Hega+ agha wee merie ha; ha wee biri n’ụlọikwuu ha n’ógbè dum dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Gilied. 11 Ma ụmụ Gad,+ bụ́ ndị biri n’ihu ha, biri n’ala Beshan+ ruo Saleka.+ 12 Joel bụ onyeisi, Shefam bụ onye nke abụọ, nakwa Jenaị na Shefat, n’ime Beshan. 13 Ụmụnne ha, ndị si n’ụlọ ndị nna nna ha, bụ Maịkel na Meshọlam na Shiba na Joraị na Jekan na Zaya na Iba, mmadụ asaa. 14 Ndị a bụ ụmụ Abihel nwa Huraị, nwa Jeroa, nwa Gilied, nwa Maịkel, nwa Jeshishaị, nwa Jado, nwa Bọz; 15 Ehaị nwa Abdiel, nwa Gunaị, bụ́ onyeisi ụlọ ndị nna nna ha. 16 Ha wee biri na Gilied,+ na Beshan+ nakwa n’obodo nta ya niile+ nakwa n’ala ịta ahịhịa niile nke Sharọn ruo ebe ha jedebere. 17 E debara aha ha niile n’akwụkwọ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị n’ụbọchị Jotam+ bụ́ eze Juda nakwa n’ụbọchị Jeroboam+ bụ́ eze Izrel. 18 Ma n’ime ụmụ Ruben na ndị Gad na ọkara ebo Manase, ndị dike,+ bụ́ ndị ikom na-ebu ọta na mma agha na ndị na-ekwe ụta, ndị e nyere ọzụzụ ịlụ agha, dị puku mmadụ iri anọ na anọ na narị asaa na iri isii bụ́ ndị na-aga agha.+ 19 Ha wee malite ibuso ndị Hega agha,+ nakwa Jitọ+ na Nefish+ na Nodab. 20 E wee nyere ha aka ibuso ha agha, nke mere na e nyefere ndị Hega na ndị niile ha na ha so n’aka ha, n’ihi na ha kpọkuru Chineke maka enyemaka+ n’agha ahụ, o wee nabata arịrịọ ha n’ihi na ha tụkwasịrị ya obi.+ 21 Ha wee kpụrụ anụ ụlọ ha,+ kamel ha ndị dị puku iri ise, nakwa narị puku atụrụ abụọ na iri ise, nakwa puku ịnyịnya ibu abụọ, dọrọkwa otu narị mkpụrụ obi bụ́ mmadụ n’agha.+ 22 N’ihi na e gburu ọtụtụ ndị, n’ihi na agha ahụ si n’aka ezi Chineke.+ Ha wee bichie ha ruo n’oge a dọọrọ ha n’agha.+ 23 Ma ụmụ ọkara ebo Manase+ biri n’ala ahụ malite na Beshan+ ruo Bel-hemọn+ na Sina+ nakwa n’Ugwu Hemọn.+ Ha wee dị ọtụtụ. 24 Ndị a bụ ndị isi n’ụlọ ndị nna nna ha: Ife na Ịshaị na Iliel na Azriel na Jeremaya na Họdavaya na Jadiel, ndị dimkpa bụ́ dike, ndị a ma ama, ndị isi nke ụlọ ndị nna nna ha. 25 Ha wee malite imeso Chineke ndị nna nna ha omume ekwesịghị ntụkwasị obi. Ha na chi+ ndị ala ahụ, ndị Chineke lara n’iyi n’ihu ha, wee na-enwe mmekọahụ rụrụ arụ.+ 26 N’ihi ya, Chineke Izrel kpaliri mmụọ+ Pul+ bụ́ eze Asiria,+ ya bụ, mmụọ Tilgat-pilniza+ bụ́ eze Asiria, o wee dọrọ+ ụmụ Ruben na ndị Gad na ọkara ebo Manase n’agha ma kpọta ha na Hela+ na Hebọ na Hera nakwa n’akụkụ osimiri Gozan, ha wee biri n’ebe ahụ ruo taa.
1 Ihe E Mere 5